Sina DD500 Ceiling Halogen Single Mount Surgical Light miaraka amina mpamorona sy rafitra mpamatsy bateria | Wanyu
DD500 Ceiling Halogen Taratasy tokana fandidiana an-tendrombohitra miaraka amin'ny rafitra famerenana bateria
Ny hazavana fandidiana D500 Halogen dia misy amin'ny fomba telo, valindrihana valindrihana, finday ary rindrina. DD500 dia manondro ny hazavan'ny fandidiana halogène tokana.
Ny hazavana fandidiana D500 Halogen dia misy amin'ny fomba telo, valindrihana valindrihana, finday ary rindrina.
DD500 dia manondro ny hazavan'ny fandidiana halogène tokana.
Ity jiro fandidiana halogen ity dia misy fitaratra 2400. Izy io dia afaka manome hazavana hatramin'ny 13000, ary CRI avo mihoatra ny 96 sy mihoatra ny 4000K ny mari-pana loko. Fifantohana azo ovaina amin'ny tanana, 12-30cm, izay afaka mamaly ny filan'ny fandidiana hazondamosina miaraka amina tsindrona kely mankany amin'ny fandidiana fandoroana lehibe.
Efitra fandidiana andro, efitrano fandidiana laparoskopika, efitrano fandidiana kely.
Fandidiana klinika, ao anatin'izany ny fandidiana madinidinika amin'ny ankapobeny, ny fandidiana plastika, ny fandidiana laparoskopika.
1. Mihaona amin'ny fenitra fanadiovana ny laminera
Ny endriny voafaritra tanteraka, izay tsy mora ny manangona vovoka, mifanaraka amin'ny fanadiovana ny laminera ao amin'ny efi-trano maoderina sy ny fepetra famonoana otrikaretina.
2. Reflector kalitao
4. Jiro mangatsiaka
Korea atsimo dia nanafatra vera fanamafisam-panafana hafanana ara-pitsaboana, mba tsy hiakatra mihoatra ny 10 degre ny fiakaran'ny maripana ary tsy hiteraka fitrandrahana rano any amin'ny faritra maratra.
5. Box mifamadika mahery
Fahatsiarovana ny famirapiratana.
Ny mari-pamantarana tsy fahombiazan'ny jiro lehibe dia mampatsiahy ny fanoloana ny jiro amin'ny fotoana aorian'ny fandidiana.
6. Fitaovana fampiatoana maivana
Jiro fandidiana Halogen amin'ny valindrihana DD500
40.000- 130.000 lux
Previous: Fantsona endoskopika fandidiana endoskopika TS-Q-100 Double Arm Mechnical
Manaraka: DD620 Ceiling Mounted Integral Reflection miasa amin'ny jiro miaraka amin'ny fifantohana amin'ny tanana
Jiro fandidiana Halogen napetraka amin'ny rindrina DB500 miaraka amin'ny M ...